Izindaba - Izinyathelo Zokuqapha Umbhede kagesi esibhedlela
Izinyathelo Zokuqapha Ukufakwa kombhede esibhedlela kagesi
1. Ngaphambi kokusebenzisa umbhede wezokwelapha kagesi osebenza ngemisebenzi eminingi, qala uhlole ukuthi intambo kagesi ixhumeke ngokuqinile yini. Ukuthi ikhebula lesilawuli linokwethenjelwa yini.
2. Intambo kagesi nentambo kagesi ye-actuator eqondile yesilawuli ngeke ibekwe phakathi kwesixhumanisi sokuphakamisa nohlaka lombhede olungaphezulu nolungaphansi ukuvimbela izintambo ukuthi zinganqunywa futhi zidale izingozi zemishini yomuntu siqu.
3. Ngemuva kokuphakanyiswa kwendiza yangemuva, isiguli silele kuphaneli futhi asivunyelwe ukusunduza.
4. Abantu abakwazi ukuma embhedeni bagxume. Lapho ibhodi langemuva liphakanyiswa, abantu abahleli ebhodini elingemuva futhi abame kuphaneli lombhede abavunyelwe ukusunduza.
5. Ngemuva kokuthi isondo lendawo yonke libhulekiwe, akuvumelekile ukusunduza noma ukunyakaza, lingahamba kuphela ngemuva kokukhipha ibhuleki.
6. Akuvunyelwe ukuyicindezela ngokuvundlile ukugwema ukulimala komgwaqo ophakamisa onogada.
7. Indawo engalingani yomgwaqo ayinakusetshenziswa ukuvimbela ukulimala kwesondo lendawo yonke kombhede wezokwelapha kagesi osebenza ngemisebenzi eminingi.
8. Uma usebenzisa isilawuli, izinkinobho kuphaneli yokulawula zingacindezelwa kuphela ngamunye ukuqedela isenzo. Akuvunyelwe ukucindezela izinkinobho ezingaphezu kwezimbili ngasikhathi sinye ukusebenzisa umbhede wezokwelapha kagesi osebenza ngemisebenzi eminingi, ukugwema ukungasebenzi kahle nokubeka engcupheni ukuphepha kweziguli.
9. Lapho umbhede wezokwelapha kagesi osebenza ngemisebenzi eminingi udinga ukunyakaziswa, ipulagi yamandla kufanele ikhishwe, futhi ulayini wesilawuli samandla kufanele ulimale ngaphambi kokuba uphushulwe.
10. Lapho umbhede wezokwelapha kagesi osebenza ngemisebenzi eminingi udinga ukuhanjiswa, i-guardrail ephakanyiswayo kufanele iphakanyiswe ukuvimbela isiguli ukuthi singawi futhi silimale ngesikhathi sinyakaza. Lapho umbhede kagesi uhamba, abantu ababili kufanele bawusebenze ngasikhathi sinye ukugwema ukulahlekelwa ukuqondiswa kwesiqondisi ngesikhathi senqubo yokuqalisa, okwenza umonakalo ezingxenyeni zesakhiwo nokubeka engozini impilo yeziguli.
Isikhathi Iposi: Jan-26-2021
Inqola Yezokwelapha Yezokwelapha, Inqola Yezokwelapha Enamadraki, Inqola yabahlengikazi engenantambo, Inqola Yesibhedlela, I-Trolley Medical, I-Laptop Trolley,